कसरी प्राथमिक अनुसन्धानले ब्रान्डलाई उद्योग नेताहरूमा परिणत गर्दछ Martech Zone
मार्केटरहरूले सामग्री मार्केटिंग, सोशल मिडिया, नेटिभ बिज्ञापन र दर्जनौं अन्य मार्केटि strate रणनीतिहरूमा परिवर्तन गरेका छन् उनीहरूको लक्षित दर्शकहरूसँग सम्बन्ध बनाउन। मार्केटिंग पेशेवरहरु निरन्तर नयाँ ब्रान्डको अधिकार र पहिचान निर्माण गर्न रणनीतिहरु खोज्दैछन्। एउटा अनोखा तरीका जुन धेरै कम्पनीहरूले तिनीहरूको स्थिति प्रदर्शन गर्दछ उद्योग नेताहरू अद्वितीय बनाएर हो प्राथमिक अनुसन्धान ती दुवै विश्वसनीय र उनीहरूका पाठकहरूको लागि उपयोगी छ।
प्राथमिक बजार अनुसन्धान परिभाषा: स्रोतबाट सिधै आएको जानकारी potential जुन, सम्भावित ग्राहकहरू। तपाईं यो जानकारी आफैं संकलित गर्न सक्नुहुनेछ वा कसैलाई काममा लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईंको लागि सर्वेक्षणहरू, फोकस समूहहरू र अन्य विधिहरू मार्फत संकलन गर्नका लागि। उद्यमी द्वारा परिभाषा
Janna फिंच, मा प्रबन्धक संपादक सफ्टवेयर सल्लाह, एक शोध फर्म जसले मार्केटिंग सफ्टवेयरको निःशुल्क समीक्षा प्रदान गर्दछ, हालसालै एक रिपोर्ट विकसित त्यो प्रयोग कम्पनीहरूको चार उदाहरण प्रदान गर्दछ प्राथमिक अनुसन्धान एक प्रभावी ब्रान्डिंग रणनीति को रूप मा। हामीले फिंचलाई समात्ने निर्णय ग decided्यौं र देखें कि उनीसँग यस रणनीति प्रयोग गर्ने बारे कुन थप जानकारी साझेदारी गर्ने छ। यहाँ उनले के प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो:
प्राथमिक अनुसन्धानले कसरी ब्रान्डको अधिकार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ?
मार्केटरहरु लाई थाहा छ कि अधिक जानकारी साझा गरीएको छ र अधिक प्रदर्शन को लागी खोज प्रदर्शन को बृद्धि गर्न को लागी पर्याप्त छैन वा एक पाठक को विकास गर्न को लागी नेतृत्व र रूपान्तरण उत्पन्न। यो सफलताको लागि नुस्खा होईन, र यसले गर्दैन तपाईंको ब्रान्ड भिन्न गर्नुहोस् अन्य ब्रान्डबाट।
उच्च-गुणवत्ता, मूल सामग्री तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको आवाज माथि उठ्नको एक उत्तम तरिका हो र प्राथमिक अनुसन्धान बिलमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। प्राथमिक अनुसन्धान, जब उचित रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, तपाईंको सम्भावित सामग्री प्रदान गर्दछ जुन अद्वितीय हो र कहिँ भेटिएन किनभने यो नयाँ हो।
प्राथमिक अनुसन्धान प्रकाशनका महत्त्वपूर्ण लाभहरू छन्:
सामग्री साझेदारी हुन्छ: व्यक्तिहरू सँधै नयाँ र उत्साहजनक सामग्री खोजिरहेका हुन्छन् र सयौं पटक थोरै फरक स्पिनको साथ वितरित गरिएको सामग्रीलाई वेवास्ता गर्छन्। मूल अनुसन्धानको चाखलाग्दो र उपयोगी हुने राम्रो मौका छ, जसको मतलब हो कि मानिसहरूले यसलाई च्याट गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जस्तै, यसलाई पिन गर्नुहोस् वा यस बारेमा ब्लग गर्नुहोस्।
It तपाईंको अधिकार हाइलाइट गर्दछ विषयमा: प्राथमिक अनुसन्धान परियोजना शुरू गर्नु सजिलो काम होइन। यसलाई धेरै व्यक्ति घण्टा र समर्पण आवश्यक छ। व्यक्तिहरूले यसलाई पहिचान गर्छन् र जान्दछन् कि यदि तपाइँको कम्पनी एक प्रमुख अनुसन्धान परियोजना शुरू गर्न को लागी पर्याप्त गम्भीर थियो, तपाईं सम्भवतः यस विषयमा एक अधिकारी हुनुहुन्छ।
भवन अधिकार पनि छ SEO प्रभावहरू। अधिक व्यक्तिहरू जसले तपाईंको ब्राण्डलाई विश्वास गर्दछन् र तपाईंको सामग्रीलाई आदर गर्दछन्, तपाईंको सामग्री अधिक साझेदारी र लिंकमा गइरहेको छ। खोज इञ्जिनहरूले निर्धारित गर्दछ कि यदि तपाईं सामग्री भारी साझेदारी गरिएको छ, तब यो सम्भवतः बहुमूल्य स्रोत हो। यदि गुगलले तपाईंको सामग्रीमा यस सम्बन्धलाई देख्दछ भने, तपाईंको ब्रान्डले अधिक अधिकार लिनेछ र SERPs मा उच्च देखिन शुरू गर्दछ र अधिक व्यक्तिहरूले तपाईंको साइट भ्रमण गर्नेछन्। अधिक आगन्तुकहरु लाई अधिक रूपान्तरणको अर्थ हुन्छ।
किन इन्टरनेट मा एक आधिकारिक ब्रान्ड निर्माण व्यवसायहरु को लागी महत्वपूर्ण छ?
व्यक्ति कम्पनीहरू बाहिर खोज्छन् किनकि उनीहरूले आफ्नो ब्रान्डलाई विश्वास गर्दछन्, वा उनीहरूले खोजिरहेका जानकारी प्रदान गर्छन्, वा तिनीहरूको सकारात्मक विगतको अनुभव भएको छ। अधिक ब्रान्ड अधिकार निर्माण गरेर, तपाईं विश्वास निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। जब व्यक्तिले तपाईंको कम्पनीलाई विश्वास गर्दछन् र तपाईंलाई एक नेताको रूपमा हेर्दछन्, यसले अन्तत: बढि नेतृत्व र राजस्व निम्त्याउन सक्छ।
यो विशेष गरी इन्टरनेट मा महत्वपूर्ण छ। तपाईको ब्रान्ड जति अधिक आधिकारिक हुन्छ, खोजी परिणाममा उच्च स्तरमा यसलाई दर्ता गर्दछ। गुगलको खोजी परिणाम पृष्ठमा तपाईंको ब्यापार उच्च छ, तपाईंको ब्रान्ड अधिक दृश्यमान हुनेछ, र अधिक दृश्यताको अर्थ अधिक राजस्व हो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, कसैले पनि फेला पार्न नसक्ने वेबसाइटबाट कहिल्यै खरीद गर्दैनन्।
के त्यहाँ कुनै ब्रान्डको उदाहरण छ जसले यस मार्केटि strategy रणनीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ?
त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जसले सफलतापूर्वक उनीहरूको ब्रान्डको अधिकार निर्माण गर्न प्राथमिक अनुसन्धान प्रयोग गर्दछ। विशेष गरी एक कम्पनीले यो रणनीति कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको थियो। MOZ। Moz लगभग दशक देखि खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) मा एक अधिकार रहेको छ। जहाँसम्म, एसईओ संसाधनहरूको लागि प्रमियर जाने-जाने-स्रोतको रूपमा उनीहरूको स्थिति कायम राख्नको लागि, तिनीहरू पनि प्राथमिक अनुसन्धानमा हेर्छन्।
मोजले १२० भन्दा बढी शीर्ष एसईओ मार्केटरहरूलाई search० भन्दा बढी खोज इञ्जिन रैंकिंग कारकहरूमा उनीहरूको राय संकलन गर्न सर्वेक्षण गरेको छ। Moz ले डाटा स collected्कलन गर्‍यो पढ्न सजिलो ग्राफहरू र डाटा सारांशहरूको विकास गर्‍यो अधिकतम पठनीयता र साझेदारी योग्यता को लागी। उनीहरूको प्राथमिक खोजमा परिवर्तन गर्ने निर्णय जबरदस्त सफल भयो किनकि उनीहरूले एसईओ मार्केटरहरूलाई उपयोगी र विश्वसनीय अनुसन्धान प्रदान गरे जुन अरू कसैले पनि प्रस्ताव गर्न सक्दैनन्। यस प्रयासले तिनीहरूलाई लगभग links०० लिंक र २,००० भन्दा बढी सामाजिक सेयरहरू (र गणना गर्दै) कमायो। यस प्रकारको दृश्यताले उनीहरूको ब्रान्डको अख्तियारलाई मात्र बढाउँदैन, तर यसले उनीहरूको एसईओ जानकारी र उत्तम अभ्यासहरूको प्रतिष्ठित स्रोतको रूपमा प्रतिष्ठा पनि सुदृढ बनाउँछ।
अन्य कम्पनीहरूका लागि के सुझावहरू छन् जुन उनीहरूको ब्रान्डको अधिकार निर्माण गर्न प्राथमिक अनुसन्धान प्रयोग गरीरहेको छ?
बुझ्नुहोस् कि उच्च गुणवत्ताको प्राथमिक अनुसन्धान सिर्जना गर्दा धेरै समय र प्रयास लिन्छ। कुनै पनि प्रमुख परियोजनाको रूपमा, रणनीति र योजना महत्वपूर्ण छ। यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्छ तपाईले डेटा स collecting्कलन गर्न सुरू गर्नु अघि:
म के खोज्न चाहान्छु?
म कसरी यस प्रकारको जानकारी स ?्कलन गर्न सक्छु? आफैलाई सोध्नुहोस् यदि डाटा स collect्कलन गर्ने उत्तम तरिका भनेको सेयर गर्न योग्य सर्वेक्षण सिर्जना गर्नु हो, वा विशेषज्ञहरूको सानो समूहको अन्तर्वार्ता लिनु हो, वा यदि तपाईं आफ्नै अवलोकन गरेर डाटा भेला गर्न सक्नुहुन्छ।
यस परियोजनाको खोजहरू मेरो ग्राहकहरू वा दर्शकहरूलाई कसरी उपयोगी हुनेछ? तपाईं सबै गति र गुणवत्ता डेटा एकत्रित गर्न कडा परिश्रम को माध्यम बाट जान सक्नुहुन्छ, तर यदि यो उपयोगी, चाखलाग्दो र सजिलैसँग साझा छैन भने, यसले कसरी तपाईंको अधिकार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ?
यदि तपाईंले यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने तपाईं पहिलेका धेरै प्रतियोगीहरू भन्दा अघि हुनुहुन्छ।
के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो ब्रान्डको अधिकार बढाउन प्राथमिक अनुसन्धान प्रयोग गर्नुभएको छ? कृपया तल तपाईंको कहानी वा टिप्पणीहरू साझा गर्नुहोस्।
टैग: जन्ना फिंचकेटाप्राथमिक बजार अनुसन्धानप्राथमिक अनुसन्धानअनुसन्धानसफ्टवेयर सल्लाह